“ह्ययाट्स अफ” मनिषा - नेपालबहस
गृहपृष्ठ कला/साहित्य चलचित्र “ह्ययाट्स अफ” मनिषा
८ जेठ, काठमाडौं । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले गएको सोमबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर हेण्डलमा गरेको एउटा ट्वीट यतिबेला भारतीय सञ्चारमाध्यमका लागि मसला भएको छ । नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्शा जारी गर्ने सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको ट्वीटलाई मनिषाले रिट्वीट गर्दै लेखिन्– हाम्रो सानो राष्ट्रको गरिमा बनाइराख्नु भएकोमा धन्यवाद । तीन राष्ट्रबीच शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल होस् भन्ने आशा गर्छौं ।
मनिषाका यी शब्द भारतीय मिडियाका लागि ठूलै मसला बन्यो । आजतक र एबीपी न्यूज च्यानलले आधा घण्टा त यही विषयमा चर्चा ग¥यो । नेपाली चेलीको भावनालाई भारतीय मिडियाले बढो घटिया रुपमा प्रचार गरे । तर त्यसले मनिषाको नेपालमा भने उँचाई बढाई दिएको छ । हरेक नेपालीले मनिषाप्रति गर्व गरेका छन् । चाहे जुनसुकै पार्टी आवद्ध हुन् मनिषा , नेपाल र नेपाली भावनाकी ढुकढुकी बनेकी छन् ।
भारतीय मिडियाले नेपालमा जन्मिएकी अभिनेत्री मनिषाले भारतीय रोटी खाएर चीनको गीत गाएको आरोप लगाए । तर मनिषाका भावना भने नितान्त नेपाली छ । अनावश्यक चीनलाई तानेर गरिएको टिप्पणीले भारतीय मानसिकता देखाएको छ । मनिषाले आफ्नो क्यारियर भारतमा बनाएको र रोजीरोटी कमाएको भन्दै भारतीय दलाल हुनुपर्ने आशय प्रकट गरे भारतीय सञ्चारमाध्यमले । जबकी बलिउड भनेको भारतीयको मात्र नभई संसारकै एउटा इण्डस्ट्री बनेको छ ।
त्यहाँ दैनिक हजारौं मानिस आफ्नो भाग्य चम्काउन पुग्छन् । तर सबै सफल हुँदैनन् । मनिषा पनि तिनै मध्येमा एक हुन् । उनले भारतीय सिने जगत्लाई आफ्नो बेजोड अभिनयले झुकाएकी हुन् । भारतीय भाषा, संस्कृति र परम्परालाई नयाँ उँचाई दिन उनको कडा मेहनतको योगदान थोरै थिएन । त्यसैले भारतीयले मनिषालाई दिएको भन्दा मनिषाले भारतलाई दिएको चाहीँ हो । आफ्नो मेहनतबाटै उनी त्यो मुकाममा पुगेकी हुन् ।
भारतको खाएर चीनको गाएको भन्ने भारतीय मिडियाको आरोपले के देखाउँछ भने उनीहरु नेपालीले चाहीँ उनीहरुको गुलामी गर्नुपर्छ । तर यो प्रकरणमा मनिषाले देखाएको अडान र धैयर्ताले उनको मात्र नभई सारा नेपालीलाई गर्वको अनुभूति दिलाएको छ ।
अभिनेत्री मनिषा कोइराला
अघिल्लो लेखरुपन्देहीको मणिग्राममा उपचाररत कोरोना संक्रमितको मृत्यु
अर्को लेखबन्दाबन्दीकाे समयमा शिक्षकलाई अनलाइन तालिम
अब नेता, सांसद र मन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन गाह्रो !
लोट्री परेको भन्दै करोडौँ ठगी, सात जना पक्राउ
यसरी भरिदैछ सरकारी रबैयाप्रति सामाजिक सञ्जाल
अस्थिरताको कारक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल हो कि सत्ताधारी नेकपा ?
लकडाउनकाे समयमा भिडियो हेर्ने ह्वात्तै बढे
पाँचपोखरीमा सामाजिक सञ्जालबाटै विद्यालय भर्ना अभियान शुरु